ပတ်တီးထုတ်ကုန်စက်ရုံ၊ တင်သွင်းသူများ - တရုတ်ပတ်တီးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ
100% ထူးထူးခြားခြား အရည်အသွေးရှိသော ဖိုက်ဘာမှန်အရိုးပုံသွန်းတိပ်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- ပစ္စည်း-ဖိုက်ဘာမှန်/ပိုလီစတာ အရောင်-အနီ၊ အပြာ၊ အဝါ၊ ပန်းရောင်၊ အစိမ်း၊ ခရမ်းရောင်၊ စသည်တို့ အရွယ်အစား- 5cmx4yards၊7.5cmx4yards,10cmx4yards,12.5cmx4yards,15cmx4yards ဇာတ်ကောင်နှင့် အားသာချက်- 1) ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်- အခန်းအပူချိန် တိုတောင်းသောအချိန်၊ ကောင်းသောပုံသွင်းခြင်းအင်္ဂါရပ်။2) အင်္ဂတေပတ်တီးထက် အဆ 20 မာကျောပြီး ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ပေါ့ပါးသောပစ္စည်းနှင့် ပလာစတာပတ်တီးထက် လျှော့သုံးပါ။၎င်း၏ အလေးချိန်မှာ ပလတ်စတစ် 1/5 ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အကျယ်သည် ပလတ်စတစ် 1/3 ဖြစ်သောကြောင့် ဝက်ခြံများကို လျှော့ချနိုင်သည်...
ရေစိုခံ ကိုယ်တိုင်ရိုက်နှိပ်ထားသော ချည်ထည်မဟုတ်သော ကော်ပြန့် elastic ပတ်တီးကို စက်ရုံတွင် ပြုလုပ်ထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကော်ရှူသော elastic ပတ်တီးကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်နှင့် အဖွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ 100% ချည်သားသည် ထုတ်ကုန်၏နူးညံ့မှုနှင့် ductility ကိုသေချာစေနိုင်သည်။သာလွန်ကောင်းမွန်သော ductility သည် ကပ်ခွာ elastic bandage သည် အနာကို ၀တ်ဆင်ရန် ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောကော် elastic ပတ်တီးအမျိုးအစားများထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- ကော်ပတ် elastic ပတ်တီးပစ္စည်း ယက်မ/ချည်အရောင် အပြာ၊ အနီ၊ အစိမ်း၊ အဝါ စသဖြင့် အကျယ် 2.5cm*5cm၊7.5c...
တစ်ခါသုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ထားသော ချည် သို့မဟုတ် ယက်မဟုတ်သော တြိဂံပတ်တီး
1.Material: 100% ဝါဂွမ်း သို့မဟုတ် ယက်လုပ်ထည် 2.Certificate:CE,ISO အတည်ပြု 3.Yarn:40′S 4.Mesh:50×48 5.Size:36x36x51cm,40x40x56cm 6.Package:1′s/ပလပ်စတစ်အိတ်၊ 250pcs/ctn 7.Color : အရောင်ဖျော့မထားသော သို့မဟုတ် အရောင်ဖျော့ထားသော 8. ဘေးကင်းသော pin ပါသော/မရှိသော 1. အနာကိုကာကွယ်နိုင်သည်၊ ပိုးဝင်ခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်၊ လက်မောင်း၊ ရင်ဘတ်ကို ထောက်ရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်၊ ဦးခေါင်း၊ လက်နှင့်ခြေတို့ကိုလည်း ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၀တ်စားဆင်ယင်မှု၊ ခိုင်ခံ့သောပုံဖော်နိုင်စွမ်း၊ ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန် (+40C) Alpine (-40 C) အဆိပ်မရှိ၊
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖြူရောင် elasticated tubular ချည်ပတ်တီး
ပစ္စည်းအရွယ်အစား ထုပ်ပိုးမှု ကတ်တွန်အရွယ်အစား GW/kg NW/kg Tubular ပတ်တီး၊ 21′s၊ 190g/m2၊ အဖြူရောင်(combed cotton material) 5cmx5m 72rolls/ctn 33*38*30cm 8.5 6.5 7.5cmx5m 48rolls/ctn 303*8.* 6.5 10cmx5M 36M 36M 38 * 30cmx5M 8.5 6.5 15.5 5.5 .5 6.5 28 * 30 စင်တီမီတာ 8.5 6.5 6.5 25.5 5.5 25 6.5 25.5 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5cmx10 မီတာ 30 CTN 54 *28*29cm 9.2 7.2 7.5cmx10m 30rolls/ctn 41*41*29cm 10.1 8.1 10cmx10m 20rolls/ctn 54*28*29cm 9.2 7.2 15...
ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် Tubular elastic အနာစောင့်ရှောက်မှုပိုက်ကွန်ပတ်တီး
ပစ္စည်း- Polymide+ရော်ဘာ၊ နိုင်လွန်+အစေး အနံ- 0.6cm, 1.7cm, 2.2cm, 3.8cm, 4.4cm,5.2cm etc အရှည်- ပုံမှန် 25m ဆန့်ပြီးနောက် Package: 1 pc/box 1.Good elasticity, pressure uniformity, good လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း၊ တီးဝိုင်းကို သက်တောင့်သက်သာခံစားရပြီးနောက် အဆစ်များလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခြင်း၊ ခြေလက်များညောင်းခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးပွတ်တိုက်ခြင်း၊ အဆစ်များရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းတို့သည် နောက်ဆက်တွဲကုသမှုတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သောကြောင့် ဒဏ်ရာသည် အသက်ရှူရလွယ်ကူပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။2. ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်တွဲလျက်၊ ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်မဆိုသင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှု ...
လေးလံသော tensoplast လက်ဆွဲ-ကပ်ခွာ elastic ပတ်တီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီ elastic ကော်ပတ်တီး
ပစ္စည်းအရွယ်အစား ထုပ်ပိုးခြင်း ကတ်တွန်အရွယ်အစား လေးလံသော မျှော့ကော်ပတ်တီး 5cmx4.5m 1roll/polybag,216rolls/ctn 50x38x38cm 7.5cmx4.5m 1roll/polybag,144rolls/ctn 50x38x38cm 10cmx18x19mx10cmx19mporollbag.10cmx4.5m 72 လိပ်/ctn 50x38x38cm
ခွဲစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ selvage sterile gauze ပတ်တီး 100% ချည်သား
Selvage Gauze Bandage သည် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထည်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေပြီး အနာကျက်စေရန်အတွက် သက်သာစေရန် ပါးလွှာသော ယက်လုပ်ထားသည့် အထည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို နေရာတွင် လုံခြုံစေရန်အတွက် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤပတ်တီးများသည် အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားများစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။1.ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှု- စစ်အတွင်း အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းနှင့် အသင့်အနေအထား။လေ့ကျင့်ရေး ၊ ဂိမ်း ၊ အားကစား အမျိုးမျိုး ၊ အားကစား အကာအကွယ် ၊ ကွင်းပြင် ၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ၊ ကိုယ်တိုင် စောင့်ရှောက်မှု နှင့် မိသားစု ကုသရေး တို့ကို ကယ်တင်ခြင်း ...
POP အတွက် cast padding နှင့်အတူ တစ်ခါသုံးအနာစောင့်ရှောက်မှု ပေါ့ပ်ကာစ်ပတ်တီး
1. ပတ်တီးစိမ်သောအခါ ဂျစ်ပဆမ်သည် အနည်းငယ် ဖြုန်းတီးသည်။ချက်ပြုတ်ချိန်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်- 2-5 မိနစ် (စူပါအမြန်အမျိုးအစား), 5-8 မိနစ် (အမြန်အမျိုးအစား), 4-8 မိနစ် (ပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးအစား) ကိုလည်းအခြေခံပြီးသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များကို curing time.2. Hardness, non-load bearing အစိတ်အပိုင်းများ,6အလွှာကိုအသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံး, ပုံမှန်ပတ်တီး 1/3 သောက်သုံးသောအခြောက်ခံချိန်ထက်နည်းသည် 36 နာရီအတွင်းမြန်ဆန်ပြီးလုံးဝခြောက်သွေ့သည်။3. ခိုင်ခံ့စွာ လိုက်လျောညီထွေရှိသော၊ မြင့်မားသောအပူချိန် (+40 “C) alpine (-40 'C) အဆိပ်မရှိသော၊...
ကောင်းသောစျေးနှုန်းပုံမှန် pbt Self-adhesive elastic ပတ်တီးအတည်ပြု
ဖော်ပြချက်- ဖွဲ့စည်းမှု- ချည်၊ viscose၊ polyester အလေးချိန်- 30.55gsm စသည်တို့ အကျယ်- 5cm၊ 7.5cm.10cm၊ 15cm၊ 20cm;ပုံမှန်အလျား 4.5 မီတာ၊4မီတာ အမျိုးမျိုးသော ဆန့်အလျားအနံရရှိနိုင်သော ပြီးစီးမှု- သတ္တုကလစ်များနှင့် မျှော့ကြိုးများ သို့မဟုတ် ကလစ်ထုပ်ပိုးခြင်းမရှိဘဲ ရရှိနိုင်ပါသည်- အထုပ်အများအပြားတွင် ရနိုင်သည်၊ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ပုံမှန်ထုပ်ပိုးမှုမှာ ထုပ်ပိုးခြင်းဖြစ်သည် အင်္ဂါရပ်များ- သူ့အလိုလို တွယ်ကပ်နေသည်၊ လူနာသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် ပျော့ပျောင်းသော polyester ထည် cont လိုအပ်သော application များတွင်အသုံးပြုရန်၊
အရေပြားအရောင်မြင့်သော elastic compression ပတ်တီးနှင့်အတူlatex သို့မဟုတ် latex အခမဲ့
ပစ္စည်း : ပိုလီစတာ / ချည် ၊ ရော်ဘာ / spandex အရောင် : အသားအရေ အလင်း / နက်မှောင်သောအသားအရေ / သဘာဝအတိုင်း အလေးချိန် : 80g, 85g, 90g, 100g, 105g, 110g, 120g စသည်တို့ အကျယ်: 5cm, 7.5cm, 10cm,15cm,20cm စသည်တို့ အရှည် :5မီတာ၊5ကိုက် ၊4မီတာ စသည်ဖြင့် စေး သို့မဟုတ် အစေး အခမဲ့ ထုပ်ပိုးခြင်း : 1 လိပ် / တစ်ဦးချင်းထုပ်ပိုးခြင်း သက်သာပြီး ဘေးကင်းခြင်း၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မတူကွဲပြားသော၊ အသုံးပြုမှုအမြောက်အမြား၊ အရိုးပေါင်းစပ်ထားသော ပတ်တီး၏ အားသာချက်များ၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းခြင်း၊ မြင့်မားသော မာကျောမှု ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်၊ ရေကောင်း ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ကောင်းမွန်သောပုံသဏ္ဍာန်၊ ပတ်တီး...